Arsenal oo u soo baxday wareega 16-ka ee Europa League kaddib markii ay ka adkaatay Benfica… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 25 Feb 2021. Arsenal ayaa u soo baxday wareega 16-ka ee tartanka UEFA Europa League kaddib markii ay kaga adkaatay Benfica 3-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada lugta labaad wareega 32-da ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Arsenal iyo Benfica ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 21-aad kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Pierre-Emerick Aubameyang, kaddib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis Bukayo Saka.
43 daqiiqo naadiga Benfica ayaa la timid goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay xiddigooda Diogo Goncalves.
Daqiiqadii 61-aad Benfica ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-2 ka dhigay xiddigooda Rafa Silva.
Laakiin 67 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Kieran Tierney oo caawin ka helay saaxiibkiis Willian ayaa ciyaarta ka dhigay barbardhac 2-2 ah.
Daqiiqadii 87-aad Pierre-Emerick Aubameyang oo caawin ka helay saaxiibkiis Bukayo Saka ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Arsenal, wuxuuna dheesha ka dhigay 3-2.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-2 oo ay Arsenal kaga adkaatay kooxda Benfica, kulan ka tirsanaa lugta labaad ee wareegga 32-da tartanka UEFA Europa League, xilli Gunners ay u soo baxday wareega xiga 16-ka ee tartankan.